International Arakanese Student Monks: July 2009
Arakanese Social Nets
Ko Gree Kyaw
Buddhist E. Library
4 International Colleges & Universities - Higher Education Directory and Search Engine
IABU - Welcome
Free English Lessons for Students - ESL Monkeys
Make learning English your hobby,
VOA Speacial English Programe
Tipitaka CD V4 Download
English Myanmar Dictionary Download
Myanmar Eeglish< English Myanmar Dictionary Download
Myanmar English Online Dictionary
Attention Please, All Our Members! Please Don't Write Anything In Myanmar On This Blog. Please Write In Arakan and English.
Posted by International Arakanese Student Monks at 9:01 PM0comments
“ဗိုလ်ချုပ် မွီးနိ့၊ အာဇာနီနိ့
Gtalk ကနီ Message တင်ရေ
Mail ကနီပနာ Forward လုပ်တေ
Posted by International Arakanese Student Monks at 2:25 AM0comments
Posted by International Arakanese Student Monks at 4:38 AM0comments
Posted by International Arakanese Student Monks at 7:55 AM0comments
Kills many monks, and commits
The offence of causing schism in monastic order,
But not Devadattha…
Destroys the Buddha Images,
But not Osamabinladen…
Lives under the ground,
But not King Yama…
Bealeader of genocide,
But not Hitler…
Eats human flesh,
But not Porisada…
Be with horn,
But not an ox…
Beats everyone and everything,
But notamad dog…
Posted by International Arakanese Student Monks at 3:00 AM0comments
စာတည်းအဖွဲ့ ရခိုင်ရိုးမ မဂ္ဂဇင်း
အကျွန်ရေ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနမှ နည်းပြ ဒေါ်မြနှင်းဝေဖြစ်ပါရေ။ အကျွန်မာန်အောင်ဇာတိပါ။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဖြစ်တေဘ၀ကပင် ရခိုင်မြောက်ဦးကို အကျွန်အထူးစိတ် ၀င်စားခပါရေ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မရောက်ဟိနိုင်ခပါ။ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ရပြီးကေ မဟာဝိဇ္ဇာဆက်တက်ယင်းပင်၊ သမိုင်းဌာနမှာ နည်းပြ ၀င်လုပ်နိန်ခပါရေ။ ရခိုင်သမိုင်းကိုလည်း လက်လှမ်းမှီရေဆီလေ့လာပါရေ။ ဆရာသမားရို့၏ ကျေဇူးတရား ကြောင့် အကျွန်၏မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့စာတမ်းရေ အကျွန်စိတ်ဝင်စားသော ချစ်မြတ်နိုးသော ရခိုင်သမိုင်းနန့် ပတ်သတ် တေ စာတမ်းမျိုးကို တင်ပြခွင့် ရလှာပါရေ။ ဌာနက ချပီးလိုက်တေစာတမ်းက “ ရခိုင်မိဖုရားရို့၏ ကိုယ်ကျင့်သီလ စောင့်ထိမ်းမှု ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး” ဖြစ်ပါရေ။
ယင်းကိစ္စနန့်အကျွန်မြောက်ဦးကို ၁၉၉၄ ခု မတ်လဆန်းမှာ ရောက်လာပါရေ။အကျွန်ဘ၀မှာ အလွန်ပျော်ရွှင် တက်ကြွ ကြည်နူးဖို့ကောင်းရေနိ ရက်တိပါဗျယ်။ ကျောင်းနီဖက်တိ စာပီသမားတိ၊ ရှိဟောင်း သုတေသနဌာန၊ သမိုင်းသုတေသီတိက လိုအပ်စွာတိ အစစအရာရာကို ကူညီပီးပါရေ၊ ပညာရေးဌာနက လူကြီးတိကလေး မှတ်တမ်းတင်လောက်အောင် ကူညီပီးပါရေ။ အတိုသျှေပြောရကေ ကိုယ့််လူမျိုးအတွက် ကိုယ့်ဘ၀အတွက် မှတ်တိုင်လို့ပြောစမှတ် စာတမ်းတစောင် ဖြစ်လာအောင် လိုအပ်ချက်တိ အပြည့်အစုံရခရေလို့ အကျွန် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ထားပါရေ။ မိမိ၏ စိတ်စေတနာ မှန်ကန်မှုကြောင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပီးရေသူရို့၏ ကြီးမား သော ကျေးဇူးတရားကို ဇာခါလေ့သော့ မိဖို့မဟုတ်ပါ။လုပ်ငန်းတာဝန် ပြီးစီးရေ သင်္ကြန်နိတရက်မှာ ရတနာ့ မာန်အောင် ကျောင်းတိုက်၏တရားစခန်းဖွင့်ပွဲနှင့် ကြုံပါရေ။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အခါတရပ်ပိုင် မှတ်ပြီးကေ ၊ မြောက်ဦးမြီ တရားစခန်းမှာ ၀စီပိတ် (၉)ရက်ဝင်ပါရေ။
ထေရ၀ါဒသာသနာထွန်းကားရေ ရခိုင်မြောက်ဦးခေတ်မှာ အဂုတရားစခန်းဖွင့်လိုက်ထားရေ ရတနာ့မာန်အောင် ၀င်းရေ တောင်ကိုးလုံးဝိုင်းရန်ထားပြီး အလွန်စိတ်နှစ်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေနီရာ တစ်ခုဖြစ်ပါရေ။ တရားစခန်း ၀င်သူတိ ကတော့ စစ်တွေ၊ မြောက်ဦး၊ကျောက်တော်၊ မင်းပြားမြို့ရွာအနှံ့ကပါ။ အကျွန်နန့် အိပ်ရာချင်းကပ်လို့ အရီးဆိုကေ အသက်ခြောက်ဆယ်လောက်ဟိပါဖို့။ ထမင်းတ၀ိုင်းတည်းလည်းကျပါရေ။ ပြောရဖို့ဆိုကေ ရုပ်ဆင်းရူပါက အဆင်းအလွန်လှပခန့်ငြားရေ အရီးတယောက်ဖြစ်ပါရေ။ မျက်နှာရေ ရှင်းသန့်ပြီးငြိမ်းချမ်း နီပါရေ။ သန္တိရသကို ဆောင်ရေမျက်နှာမျိုးပါ။ အသားအရီဝင်းလို့ နှာတံသွယ်သွယ်မျက်လုံးမျက်ခုံး ကောင်းကောင်းနန့်ပါ။ တက္ကသိုလ် လောကမှာ လှပခန့်ငြားရေ အမျိုးသမီးတိ ဆရာမတိတွိဖူးပါယင့်။ အကျွန်ရို့ မာန်အောင်သူမတိလေ့ အလှမှာ နာမည်ဟိရေ အရပ်ဖြစ်ပါယင့်။ ယေကေလေ့ဒေအရီးနန့်တော့ လုံးဝယှဉ်လို့မရပါ။ တရားစခန်းပြီးဗျာလ်ဖြစ်လို့ စကားပြောဖြစ်ကတ်ပါရေ။ လေးမြို့ချောင်းဖျားကလို့ ပြောပါရေ။ စကားရှည်ရှည် ပြောချင်ပုံမရပါ။ အကျွန့်ကို သမိုင်းဌာနက ဆရာမသျှေတယောက်လို့သိရေခါ စကားတိ အရှည်ကြီးပြောဖြစ်ကတ်ပါရေ။ အကျွန့်စာတမ်း အားနည်းချက်တိကို ဖြည့်စွက်ပြုပြင်ပီးပါရေ။ ရခိုင်ရာဇ၀င်၊ မြန်မာရာဇ၀င်ကို ဆရာတဆူပိုင် နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင် ပါရေ။ အကျွန်အချိန်ရကေ အရီးမနန့်လိုက်ချင်ရေ ပြောရေခါ၊ ခေါင်းခါပါရေ။ သူရေသာသနာ တော်၏ အဆုံအမအောက်က ယောဂီဖြစ်ကြောင်း လောကီကိစ္စများကို ကြိုးစားပြီး မိပစ်နိန်ကြောင်း၊ စကားအဆိုက်ကျလို့ ပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါရေ။
စခန်းကထွက်ဖို့နိ မိုးထအာရုဏ်တက်မှာ အကျွန့်ကိုနှိုးပြီးကေ သူနန့်လမ်းလျှောက်လိုက်ဖို့ ခေါ်ပါရေ။ ရတနာ့မာန်အောင်စေတီတော်ကို ကန်တော့ကတ်ပြီးကေ၊ အရီးမဘေးက အကျွန်လိုက်လာမိပါရေ။ရင်ထဲမှာ ထူးဆန်းမှု ခံစားမှုတခုပေါ်နီရေလို့ အကျွန်သတိထားမိပါရေ။ စကားမပြောဖြစ်ကတ်ပါ။ အရီးမရေ မြောက်ဦး ပန်းမြောင်းကာရီလမ်းကို ဖြတ်ပြီးကေ သကျမာန်အောင်စေတီတော်ကို သောတာပန် ဘီလူးနှစ်ယောက် စောင့်ရေ အနောက်ဘက်မုခ်က ၀င်ပါရေ။စေတီတော်ကို ရည်မှန်းပြီး လက်အုပ်ချီလို့အကျွန့်ရှိက လျှောက်ပါရေ။ အကျွန်လေ့ယင်းအတိုင်း လက်အုပ်ချီလို့ နောက်ကလိုက်ပါရေ။ နီရောင်အင်တန်လင်းနီပါဗျာ။
စေတီတော်ရှိမှာ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာ ရပ်နိန်ပြီးကေ လက်ကိုအသာချလို့ အကျွန့်ဘက်ကို လှည့်လိုက်ပါရေ။
အရီးမရေ အကျွန်နန့်ရွယ်တူ ကမ္ဘာလောက်လှပရေ မိန်းမပျိုတဦး ဖြစ်နိန်ပါရေ။ သူရေနတ်သျှင်မယ်လို့ခေါ် ကတ်တေ သီရိသုမြတ်စွာ ဒေ၀ီဖြစ်ကြောင်း။ ဒေသကျမာန်အောင်စေတီတော်ကို သူနန့်မောင်တော်ကြီး သီရိ သုဓမ္မရာဇာရို့ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမခံယူပြီး တည်ဆောက်ခကတ်ကြောင်း ပြောပြပါရေ။
သူအကျွန့်လက်ထဲကို စာတစောင်ထည့်ပီးလိုက်တေ။ ဒေစာကို ရခိုင်ပြည်သူတိအားလုံး ဖတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပီးဖို့ မောတ္တာရပ်ခံပါရေ။ အကျွန့်ကို ပြန်လီဖိလို့ပြောပြီးကေ သူပုတီးစိပ်ဖို့ကျန်ခပါရေ။
သီရိသုမြတ်စွာဒေ၀ီ၏စာကို အကျွန်ရခိုင်ရိုးမ မဂ္ဂဇင်းသို့ ပို့ပီးလိုက်ပါယင့် ဖော်ပြပီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါရေ။
အေနိခါ အကျွန်ရေ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ အဆုံအမအောက်မှာ သံသရာဝဋ်က လွတ်မြောက်ဖို့တခုကိုရာ အာရုံပြု ကျင့်ကြံအားထုတ်နိန်ပါရေ။ အကျွန်အတိတ်ကို မိန့်ထားပါရေ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကိုတည့်တည့်ရှုပါရေ၊ ကုန်ခရေမိုးတွင်း တရက်နိမှာ ရခိုင်ကဗျာတပုဒ်ကို မဂ္ဂဇင်းတစောင်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲဖတ်ရပါရေ။ အကျွန်မျက်ရည်ကို ထိမ်းလို့ မရပါ။ စိပ်ပုတီးလက်လွတ်ပြီး အကျွန်အချေတယောက်ပိုင် ငိုမိပါရေ။
အော်---- နတ်သျှင်မယ် နတ်သျှင်မယ်
နှစ်ပေါင်း သုံးရာငါးဆယ်ပင်ကျော်လီပါဗျာလ်။ ထိုးအတိတ်ဘ၀၀ဋ်ကြွီးတိက အကျွန်ပြီးလို့မလွတ်ပါသိ။ အလိုက်သင့်ရေခါ အကျွန်ယှင်းပြချင်ပါရေ။ မျိုးချစ်ပြည်ချစ် စာပီပညာရှင်ရို့အကျွန့်ကို စကားပြောခွင့်ပီးကတ်ပါ။
အကျွန်ရေ ရခိုင်ပြည်သျှင် မင်းခမောင်းနန့် မိဘုရားကြီးရှင်ထွီးရို့၏ သမီးတော်ကြီးဖြစ်ပါရေ။ အကျွန့်အမိရေ ပဲခူးနန္ဒဘုရင်၏ သမီးတော်ပါ။ ချစ်သူမောင်တော်မင်းဟရီမှာ အမိကမိဘုရားသုပဘာဒေ၀ီ ဖြစ်ပါရေ။ အကျွန်နဲ့ မင်းဟရီရို့ရေ အဖတူအမိကွဲ ငယ်ကပင်ချစ်ကျွမ်းဝင်လာသူတိဖြစ်ပါရေ။ မင်းဟရီ အိမ်ရှေ့မင်းသား ဘ၀ကပင် အကျွန်ရို့ကို လက်ဆက်ပီးကတ်လို့ ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ပေါင်းသင်းနီထိုင်ကတ်ပါရေ။ အဖပြည်သျှင်မင်းခမောင် သီလွန်နတ်ရွာလားရေခါ၊ မင်းဟရီ ဘုရင်ဖြစ်လှာပါရေ။ ၁၆၂၄ ခုမှာပါ။ သီရိသုဓမ္မရာဇာဘွဲ့ကို ခံယူပြီးကေ အကျွန့်ကို သီရိသုမြတ်စွာဒေ၀ီဘွဲ့ ပီးပါရေ။
ယင်းအချိန်မှာ အကျွန်ရို့မျိုးဆက်သစ် ရတနာတိဖြစ်တေ မင်းစနီ၊ မန်ကြီးစွာနန့်၊ သမီးရွှေကြင်စွာ သုံးယောက် ဟိနီပါဗျာယ်။ မောင်တော်မင်းကြီးရေ ဘီးလောင်းတော် မင်းဗာကြီးလုပ်ခရေ မြို့တော်ကျုံး၊မြောင်း၊ ရီလှောင်၊ မစ္စင်း၊ ရင်တား၊ တံခါး၊ပြအိုး၊ တန်းဆောင်၊ပြသာဒ်၊ဇရပ်တံတား၊ ရီတွင်း၊ရီကန်၊ ဘုရားပျက်စီးယိုယွင်း နီစွာတိကို ပြုပြင်ပါရေ။ နန်းတက်စခါ အကျွန်ရို့မောင်နှံနှစ်ပါး သေလာဂီရိတောင်တော်စေတီကို လားဖူးပြီးကေ အရိယာသံဃာ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တိကို အလှူကြီးပီးပါရေ။ အဉ္စနနဒီမြစ်ကမ်းက ဘိုးတော်မင်းဖလောင်း ပဉ္ဇင်းတထောင် ခံခရေ မြစ်ကမ်းမှာလေ့ အလှူကြီးပီးပါရေ။
မင်းခေါင်းရွှေဂူကျောင်းကို ဆောက်ပြီးကေ ရဟန်းသံဃာတိကို လှူဒါန်းခကတ်ပါရေ။ မာန်ငါးပါးထဲမှာ တပါးပါရေ သကျမဉ္ဇူလို့ခေါ်ရေ သကျမာန်အောင်စေတီတော်ကို တည်ထားကိုးကွယ်ပြီး ဒါန၊သီလ ဘာဝနာ ကုသိုလ် ကောင်းမှုမှာ အကျွန်ရို့မွေ့လျှော်နီခပါရေ။ “ ဘ၀ဆက်တိုင်းမှာ မောင်တော်နန့် ဆုံရပါလို၏။ နိဗ္ဗာန်ကူးကေတောင် တူတူကူးရပါလို၏” လို့ အကျွန်ဆုတောင်းခပါရေ။ မောင်တော်မင်းဟရီရေ ရုပ်ရည်ချောမော့လှပပြီးကေ စိတ်နှလုံးပျော့ပျောင်းသိမ်မွေ့သူပါ။ဗေဒင်ယတြာတိကို အလွန်အ ကျူးယုံကြည်ဗျာယ် အြေ မှာက်ကြိုက်ပြီးကေ သာ ပေါင်းညာစားတိကို ယုံ လွယ်စွာ အားနည်းချက်ဟိသူပါ။သူယုံဗျာယ်ဆို ကေ ပြောပြလို့လည်းနား မ၀င်ပါဗျာလ်။ မင်းဖြစ်စမှာ ကမ္ဘာလောက်ကောင်းပါရေ။နောက်ပိုင်းမှာအကြံသမား၊လုပ်ကြံရေးသမားတိထောင်ချောက်မှာ ကျရလီပါရေ၊ ကိလေသကာ မဂုဏ်ကိုလဲ လွန်ကျူးတ ပ်မက်လာပါရေ။ သဘာဝလွန်ရေဆီးဝါးတိ ဘုရားရဟန္တာ တိက ဆန့်ကျင်ရေ ဆီးဝါးတိကို လိုက်စားယြုံ ကည်လှာရေ။ မင်းကျင့်တ ရား ဆယ်ပါးနှင့်မညီ၊ြ ပည်သူပြည်သားရို့ အသက်စည်းစိမ်ကို မစောင့် ရှောက်တေမက သတ်ဖြတ်စော်ကားလှာပါရေ။ အကျွန် သူ့အပေါ်သြဇာမဟိပါ။ ရခိုင်မိဖုရားတပါးစွာ သျှင်ဘုရင်အပေါ်မှာ ဇာ ပြောပိုင်ခွင့်ဟိပါဖို့လဲ။ အကျွန်ရို့က မိန့်မပါရာ သူ့ဘေးမှာ အ တိုင် ပင်ခံ အမတ်ကြီးတိဟိပါရေ။ သူရို့နန့်တိုင်းရေးပြည်ရာကို စီ မန်ခန့်ခွဲကတ်ပါရေ။ အ မတ်တိထဲမှာ အဓိကကျရေ လူတိက ပညာဟိအမတ် သစ်တက် ငလက်ရုံးနန့်လောင်ြး ကက်စား ကုသလပါ၊ ငလက်ရုံးက နန်းရင်းဝန်ကြီြး ဖစ် ပြီးကေ ကုသလစွာ ကို ယ်ရံတော်တပ်ကိုကြီးကြ ပ်တေ တပ်မှူးကြီးဖြစ်ပါရေ။ အမတ်ကုသလရေ ဘုရင် မ င်းဗာကြီးညီကဆင်းလာရေလူ၊ မင်းဗာကြီးမြစ်ဆိုပြီးကေ နန်းတွင်းမှာ သြဇြာ ကီးပြီး တွင်ကျယ်ပါရေ။ဗေဒင်ယတြာအင်းအိုင်တိကို ကျွမ်းကျင်လို့ လေးစားရရေပိုင် ကြောက်လဲကြောက်ရပါရေ။ သူနန့် ငလက်ရုံးကြားမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပဋိပက္ခဟိပါရေ။ အကျွန်ကတော့ နှဖူးကျင်းထိပ်ကျင်း နှာရောင်ကောက်ကောက် နှုတ်ခမ်းတွဲတွဲနန့် ဒေ၀ါကြီးကုသလကို ကြည့်လို့မရပါ။ ဒေ၀ါကြီးရေ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာရေ အကြံသမားလို့ အစကတည်းက ထင်မိပါရေ။ အကျွန့်မောင်တော်၏ အားနည်းချက်တိကိုဖိနင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကိုဖျက်ဆီး၊ တိုင်းပြည်ကို သွီးလန့်အောင် လုပ်ပြီးကေ၊နောက်ဆုံးမောင်တော် မင်းဟရီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လားရေ မဟုတ်ပါလား။ နောက်တက်လာရေ သားတော်မင်းစနီလက်ထက်မှာ ဘုရင်မင်းပြည်ရေးပြည်ရာ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့မှာ ကုသလ ပိုလို့ သြဇာအာဏာဟိလာပါရေ။ အမတ်ကြီးငလက်ရုံးကို သူဖယ်ထုတ်လိုက်ဗျာယ် မဟုတ်ပါလား အကျွန်က တော့ တခုလည်းပြောရေး ဆိုခွင့်မဟိရေ မဆမမိဖုရားပါရာ။ ငကုသလနဲ့သူ့တပည့်ဟူရားတတ် ရဲထွဋ်ရို့ အကျွန့်သားကို ထပ်ပြီးသတ်လိုက်ကတ်ပါရေ။ ရခိုင်နန်းတွင်းမှာ အမတ်ကြီးလေ့သူ၊ နန်းရင်းဝန်ကြီးလည်းသူ၊ ကိုယ်ရံတော်တပ်မှူးကြီးလည်းသူ၊ ကျန်ရေလူတိက သူ့လူတိနန့် အကျွန်ရို့ တော်ဝင်နန်းမျိုးဆက်တိပါ။ သူ့အတွက်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်နန့် နောက်ဆုံးဆူးတိ ငြောင့်တိကိုသူမြင်ပြီးသား ပညာတတ်သလောက် ကောက်ကျစ်ရက်စက်မှု ကမ်းကုန်ရေအမတ်ပါ။ ရခိုင်နန်းတွင်းမှာ အမတ်ပညာဟိရို့ ကြီးစိုးပါရေ။ အကျွန်ရို့ မိဘုရားတိစွာ စစ်ဘုရင်ခုံထက်က နတ်ရုပ်သျှေတိပါရာ။ အကျွန်ရို့တခုလည်း သြဇာမဟိပါ။ ဘုရင်မြှောက်တေခါ နန်းတော်ပညာဟိ အ၀ိုင်းအ၀န်းက ငကုသလနန့်ရာတန်ရေလို့ ထောက်ခံကတ်တေ မဟုတ်ပါလား။ ဇာသူထလို့ ကန့်ကွက်ခပါလေ။ နန်းတော်ကို ငကုသလက သူ့ခါးပိုက်ထဲကတပ်နန့် နင်းထားစွာကိုသိလို့ ခေါင်းညိတ်ခကတ် တေ။ ရခိုင်သမိုင်း ပျက်ရလီပါဗျယ်။
ရခိုင်တော်ဝင်ထုံးတန်းစဉ်လာအရ မြောက်ဦးထီးနန်းကို အကျွန်မပိုင်ပါ။ အကျွန်ငကုသလကို နန်းအပ်လို့ ရပါဖို့လား။ နန်းတော်က အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့က အကျွန့်ကိုပိုင်ပါရေ။ ဘုရင်လို့မြှောက်တေလူစွာ မုဒိမ်း၊ဓါးမြ၊ အနူဖြစ် ကေလေ့ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်မပိုင်ရေဘ၀မှာ ရွီးစရာလမ်းမရှိပါဗျာယ်။ လုပ်ကြံရေးသမား မိစ္ဆာကောင် ငကုသလ ရေ အမြင်လှဖို့အတွက် မိဖုရားခေါင်ကြီးဟောင်း မင်းမျိုးမင်းနွယ်အစစ် နတ်သျှင်မယ်ကို မိဖုရားမြှောက် တေ။ ဇာလောက်နတ်ယောင်ကား ကောက်ကျစ်လေ။ စဉ်းစားကြည့်ကတ်ပါဖိ။ အကျွန်သိပါရေ မောင်တော် မင်းဟရီကို ငကုသလရေ ရိုးသားရေလူမဟုတ် သတိထားဖို့ ပြောဖူးပါရေ။ သူမယုံ။ အခုအားလုံး ပျက်စီးရပါဗျယ်။ ကိုယ့်ဝမ်းနန့်လွယ်မွီးရရေ သားကိုတောင် နန်းတွင်းအမိန့်မရလို့ မသင်္ဂြိုလ်ရရေဘ၀ ။ သူရို့အမိန့်ရမှ သင်္ဂြိုလ်ရရေ ဘ၀ ။ လင်သီသားသီလို့မကျီသိ။ လူသတ်ကောင်နန့် လက်ထပ်ရရေ ရခိုင်မိဖုရားတပါး၏ နှလုံးသားဝေဒနာကို တစိသျှေလောက်ရာ မျှဝီလို့ခံစားကြည့်ကတ်ပါ။ ထီးနန်းကိုရရေခါ ခွီးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်ဗျယ် သမိုင်းကို လိမ်ပါရေ။ လင်ကိုမတွယ် သားကိုမခင်ရေမိန်းမ၊ ငါနန့်ပေါင်းကေ ထိုအကျင့်ပျောက်ဖို့ မဟုတ်၊ ငါ့ကိုလည်း ပြစ်မှားဖို့ ဆိုရေလို့ ငကုသလက ပြောရေဆိုပါကာ။ ယုံကတ်ပါလား။ ငကုသလရေ မင်းရူး၊ အာဏာရူး၊ လုပ်ကြံ ရေးသမားပါ။အကျွန့်လင်ကိုသတ်၊သားကိုသတ်၊ဆွေတော်မျိုးတော်တိကို ပြုန်းအောင်သတ်ခရေလူပါ။ တတိုင်း ပြည်လုံး ငါးပါးမှောက်အောင် လုပ်ခရေလူပါ။ စကားအမျိုးမျိုးပြောပြီးကေ အလွန်ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲရေလူပါ။ သူ့စကားကိုယုံကတ်ပါလား။ တိုင်းသူပြည်သားရို့ အကျွန်ဘက်က ၀င်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကတ်ပါတချက်။ မျှမျှ တတစဉ်းစားဖို့ အကျွန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါရေ။
မင်းဖြစ်တေခါတော့ ဆရာတော်ကြီးတိ အဆိုအမိန့်ကို နားထောင်ပြီးကေ ရင်ရိုးတော်၊နံရိုးတော် စေတီနှစ်ဆူကို ပြောင်းတည်ပါရေ။ သမိုင်းမှာတော့ ဘုရားတကာလို့ရွီးဖို့ထင်ပါယင့်။ အကျွန့်အဖြစ်ကို ရရိုးသျှေတခုပြောပြပါမေ။ ကွယ်လွန်ရေ(သူသတ်ပစ်တေ) မင်းတရားကြီး သီရိသုဓမ္မရာဇာမှာ ရွှေရေးဆောင်မိန်းဖုရားနန့် သူ့လက်ရင်း တပည့်အမတ် သံတောင်စားငတုံးညို သင့်မြတ်နီကတ်တေလို့ နန်းတွင်းမှာသတင်းပြန့်ထွက်လာပါရေ။ ယေခါ ငကုသလရေ ဆရာတော်ကြီးတိကို နန်းတွင်းသို့ပင့်ပြီးကေ မင်းမိဖုရားနန့် သာမန်မူးမတ်ပြည်သူရို့ အိမ်ထောင် ပြုလို့ရပါဖို့လားလို့ လျှောက်မီးပါရေ။ ဇာလောက်ထိ နတ်တေဆိုစွာ စဉ်းစားကြည့်ကတ်ပါဖိ။ သူအမတ်ကြီး လုပ်ခရေလူပါ။ အေယှင့်ဇာသဘောပါလေ။ သျှင်ဘုရင်ကိုသတ်ပြီး သျှင်ဘုရင်မယားကို မိဘုရားမြှောက်ပြီး ယူခရေ ကျွန်အမတ်ဆိုစွာ ငကုသလသူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါလား။ ရခိုင်ရာဇ၀င်မှာ အကောက်ကျစ်ဆုံးလူပါယေ။ ယင်းအချိ်န်မှာ အကျွန်က ကျောက်အုဋ်တံတိုင်း ကာထားရေ၀င်းထဲမှာတောင် အပိတ်လှောင်ခံထားရပါဗျယ်။ အကျွန်ကျေနပ်ပါရေ တံကျင်ထိုးလို့သတ်ပစ်ကေလေ့ ကျေနပ်ပါရေ။
အကျွန်ရေ အမျိုးသီလစောင့်ထိမ်းရေ သာဂီဝင်မျိုးနွယ်ပါ။ ကုသလပိုင်လူနန့် နန်းတော်ကလက်ဆက်ပီးကေလေ့ သွီးဆက်ဖို့အကျွန် လုံးဝငြင်းဆန်ပါရေ။ အမှန်ပြန်စဉ်းစားရေခါ သူ့အတွက်စွာရေ သဘာဝကျပါရေ။ သူ့ကိုအကျွန် လုပ်ကြံသင့်ပါရေ။ အကြံသမားကတော့ခါ ကွက်ကျော်မြင်လို့ အကျွန့်ကို နန်းတွင်းကထုတ်ပြီးကေ အကျဉ်း ချထားရေ။ ယင်းဘ၀က ပိုလို့မြတ်ပါရေ။သွီးပေနီရေ ရခိုင်နန်းတွင်းမှာ အကျွန်မခြီပါဗျယ်။
သီခါနီးမှာတော့ အကျွန့်ကိုမှာရေ သူရူးခမက်ခရေ မင်းစည်းစိမ်ဆိုစွာ ဇာအဓိပ္ပါယ်ဟိပါသိလေ။ သူကျူးလွန်ခရေ ပြစ်မှုတိအတွက် နောင်တရနီပါဗျယ်။ သူအကျွန့်ကို စကားပြောချင်မှာချင်ရေ။ သူခွန်အားလျှော့နီပါဗျာယ်။ သွီးဆုတ်လားဗျာယ်။ ရခိုင်ရာဇ၀င်မှာ သူရေဇာလောက်ကောင်းကျိုး ပြုနိုင်ခပါလေ။ အကျွန်ရေ ဘုရားရှင် သာသနာတော် အဆုံးအမမှာ ငါးပါးသီလမြဲရေ ရခိုင်မင်းသမီးပါ။သူ့အတွက် အကျွန်အမျှဝီပါယင့်။ နိဗ္ဗာန်မ ရောက်ခင် သံသရာ၌ကျင်လည်ရသမျှ ဘ၀အဆက်ဆက်မှာ ဒေလူယုတ်မာတိနန့် မတွိကြုံရပါလို၏။ အမျိုးသီလ စောင့်ထိမ်းထားသောရခိုင်မြီမှာ ဒေလူယုတ်မာတိ မမွီးပါစီကေ့လို့ ယင်းနိန်ရာမှာ ဆုတောင်းမိန့်ခပါရေ။ အကျွန့်မှာရာ ဖြီမရယှင်းမရ စွပ်စွဲချက်တပုံနန့် ကျန်ခပါရေ။ ပဒေသရာဇ် မင်းယောင်္ကျားရို့ အာဏာလုပွဲမှာ အကျွန်ညှပ်ပြီး ပါလီရပါရေ။ အကျွန့်ဘ၀ ပျက်တေပိုင် မြောက်ဦးရွှေနန်းတော်ကြီးသွီးစွန်းလို့ ယိုယွင်းပျက်စီးစွာ ကိုလည်း အကျွန်မျက်စိနန့် မြင်လိုက်ရပါရေ။ ရခိုင်သမိုင်းကို ပထမဆုံးစတင်ဖျက်စီးသူရေ မင်းရူး၊အာဏာရူး၊ လုပ်ကြံရေးသမား ငကုသလ အကျွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဆုံးလူပါ။ အကျွန့်အဖို့ အကျွန့်လင်ကိုသတ် သားကိုသတ် ဆွေတော်မျိုးတော်တိကို သတ်တေလူနန့်ရာ အကျွန့်ကို ယိုးစွပ်ကတ်တေ အကျွန်ဇာပိုင်ခံစားရဖို့လဲ တချက်သျှေ စဉ်းစားကြည့်ကတ်ပါ။ ထိုလူဒေလူရွီးရေ ရာဇ၀င်မှာပါတိုင်းလည်းမယုံပါကဲ့။ ဥာဏ်ပညာနှင့် ချင့်ချိန်စဉ်းစား ကတ်ပါ။ ရာဇ၀င်ထဲကနတ်သျှင်မယ်ရေ အမျိုးသီလကိုစောင့်ရေ၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တေ သစ္စာတရားကိုမြတ် နိုးရေ ရခိုင်မိဖုရားတပါးပါလို့ရခိုင်အမျိုးသား အမျိုးသမီးများအပေါင်းရို့ သိကတ်ပါ။
ရခိုင်ပြည် အီးချမ်းသာယာပါစီ၊ ဖီးကင်းပါစီ၊နတ်ကောင်း နတ်မြတ်ရို့ ရခိုင်ပြည်ကို စောင့်ရှောက်ပါစီ။
(ရခိုင်ရိုးမ မဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
Posted by International Arakanese Student Monks at 4:23 PM0comments
Rakhine Traditional Festival
National races village in Thaketa Tawnship where the Rakhine Traditional Culture and Sports Festival held withaview to preserving the Rakhine Traditional Customs, the Rakhine people who lived in Yangon held this festival for the first time in Yangon. The ceremony was attended by the Rakhine elders in Yangon and was opened with traditional Rakhine dances.
There are “three” aims & objectives of holding this Rakhine culture and traditional sports festival. These are:-
To know and understand the Rakhine culture and tradition by the other nationalities
By knowing this culture and tradition, we can promote the friendship between Rakhine nationality and other nationalities
To preserve the Rakhine traditional sports and culture
There are two kinds of sports events which will take part in this festival. The first event is “Ra-hta-swe-bwe” in Rakhine version,akind of Tug-of –war. The second sports event is “Kyon” in Rakhine version, which can be defined as traditional wrestling.
There are traditional dances and songs programmes which will be included as an entertainment and many shops such as books stall, Rakhine traditional snacks like “Mone-di”, “Kyar-zan-thoke”, “Saw-hlaing-Mone”, shirts as souvenirs, clothing’s and traditional medicine shops are selling in our festival likeatrade fair.
Firstly, I would like to explain about “Kyon” in Rakine version. It derives from Kyar–Yon. Kyar” means “tiger” and “yon” means “quick”. Therefore, the complete meaning of “Kyon” is the quick tiger. The Rakhine wrestler can be called asaquick tiger because of his ability in wrestling movements and techniques. Kyon” the Rakhine wrestling is very different from other wrestling and it has its own rules and disciplines not to get hurt each other. It wrestler first dances jumping and making special styles in the playground. The two wrestlers have to play three rounds. They are defined as an attacker and one defender. After finishing three rounds, the first attacker becomes the defender and also the first defender becomes the attacker. The attacker who can make the back of the defender falls up to the ground wins the playing round. The first prizewinner will be awarded the gold gong, one tickle weight and for the second prizewinner, the silver gong is awarded. The “Kyon” wrestling is usually performed at the pagoda festivals.
We call carriage pulling event as “Rahta-swe-bwe” in Rakhine version, meaning that pullingakind of tug-of-war. In these sports, two teams including at least 20 persons each side has to compete three rounds. In this event, “Rahta” is made of four big wheels and the wooden frame. On the frame, there are some decorations and some bamboo leaves. Originally, the winner group can get the chance to burn that bamboo leaves. Nowaday, the winner groups are awarded the gold medal as the first prize.
Nowadays, many forms of entertainment develop like amusement park and concerts. But the traditions are well established that many seasonal festivals and national races festivals are still going strong.
Posted by International Arakanese Student Monks at 4:18 PM0comments
Pagoda relics burgled in Nilla village, Bangladesh
By Tun Kyaw, Cox's Bazaar: Unidentified people burgledapagoda of its repository of relics containing jewelry and gold ornaments in the last three days. The robbery took place in the biggest of three pagodas located in the village of Nilla near Chodhurypara in the Teknef subdivision of Cox's Bazaar district, Bangladesh, saidaRakhine local.
"When I went to the pagodas I found one of the pagoda's repository of relics broken into by burglars. They started breaking into the pagoda's cave with the Buddha image where food and flowers are offered. The people, who are illegally residing on pagoda land owned by the pagoda trustee, could have been responsible for breaking into the pagoda," he added.
Although local Buddhists complained about the robbery in the pagoda, the local authorities have not come to the pagoda till today in order to investigate and take action against those who involved, saidavillager of Nilla.
When contacted by Narinjara News Agency over telephone about the robbery, the vice-chairman of the local sub-divisional administration of Nilla said he did not know about it and put down the telephone.
About six Bangali households intruded and built houses on land owned by the pagoda trustee. They have been selling many kinds of drugs from their residence.
"Not only have they built houses on pagoda land but are selling many kinds of drugs from their homes. However, if we complain to the authorities, we are afraid of their reaction. Asaresult we don't dare to complain," saidateacher.
The three pagodas were built in ancient times on the hill by the Naff River opposite Burmese territory. The pagodas have become historic with the changes in territory, rules and passage of time.
"They burgled the pagoda and took away the relics. In addition, they intended to destroy the inside of the pagoda. If they had tried to damage the pagoda from outside, people could have seen them easily. So they planned to destroy it from inside,"� saidayouth from Chodhurypara village.
There are many pagodas built during ancient times in Bangladesh but some of them have been destroyed and others are threatened with destruction.
Posted by International Arakanese Student Monks at 4:15 PM0comments
CROWNED BUDDHA IMAGES
By U San Thar Aung
As has been mentioned in Chapter XIV, we know that Prince Siddhatta discarded the royal robes and adornments after the great renunciation. Also, Buddhist monks are forbidden to wear any other robes except monk’s robes. These two facts will naturally suggest that the presentation ofacrowned Buddha garbed in royal robes and ornaments likeaCakravartin king, is uneconomical and unorthodox. But we have found many crowed Buddha images in Arakan throughout different ages. See Picture. Go
Are they Maitreya images mentioned by many authorities? We should have found other Bodhisattva images also together with these images. But we have not. The hand gestures of these crowned Buddhas are all in line with ordinary Buddha images. They do not hold any attributes assigned toaMaitreya as mentioned in ancient Indian literature. The sitting postures of our crowned Buddhas are also in line with ordinary Buddhas. The attendant figures are also the same as those found together with ordinary Buddha images. For example, the presence, of Vasumdhari. There are too many crowned Buddhas in existence in Arakan. It is hard to believe and is illogical to assume that Buddha images are discarded and instead Maitreya images are worshipped. We must conclude that the Arakanese worshipped Buddha images. The only difference is that the images are garbed in royal robes instead of monk’s robes.
We have to note that the Buddha image came into being only after the Buddha had been regarded asaDevatideva, god of gods. Again, in, the iconographic development, the Cakravartin concept playedagreat part. The Buddha was provided with all the lakkhanas ofaCakravartin. They belonged to the Mahayana theology and must have been present in some form from very early times. These conceptions are sufficient to account for the presentation of the crowed Buddha with all the royal attributes at different ages.
In some cases, although the Buddha wearsacrown, ear-pendents, necklace and torque, we can notice the robe ofamonk on his body with shoulder flap on the left andabare right shoulder. See Picture. Go In some cases, we can find Buddha dressed up with all the attributes ofaCakravartin King; crown, ear-rings, necklets, armlets, bracelets, anklets andawaist band. See Picture. Go
Again, some of the eight scene steles of the school of Bengal and Bihar and Pagan in Burma haveacentral crowned Buddha in Bhumisparsa mudra surrounded by representations of the Eight Great events of Buddha’s life. See Picture. Go For such cases, the reader will agree that it would be far simpler to suppose that we have to do withaglorification of the earthly Buddha, by addition of the kingly attributes, which reminds us that the Buddha is more than man. The earthly Buddha, originallyaman, has been transformed intoadeity.
The crowned Buddha image most probably came about because of the desire of kings and commoners alike to worship the Buddha as the “King of Kings” as has been explained in the Maha ParinibbanaSutta.
Anyway, the Buddha is equallyaGreat Being,adeity, whether he appears in monastic robes or in royal robes.
Since separate images of Buddha represent incidents of the Blessed One’s life, we must be able to explain the crowned Buddha with all royal attributes, holding the ambrosia jar and sitting in Dhyana mudra, vajra sana. An article by U Mya about the crowned Buddha image written in the Report of the Director, Archaeological Survey, Burma for the year ending 30th September 1955, and published in 1961 is presented here. This is the Burmese version of the explanation of the existence of Crowned Buddha.
The majority of Buddha images depict the Buddha attired in simple robes like those one sees on present-day Buddhist monks. But crowned Buddha images were to be found throughout Burma and especially in the Shan States and in neighboring Laos and Thailand, since olden days.
The Wetmasut Wundank,aMinister of King Mindon, was intrigued by the crowned Buddha images and was moved to ask the Taung Khwin Thathanabaing Sayadaw, the Buddhist Patriarch of his days, to let the people know whether the casting and worship of such regally attired Buddha images was based on some incident in Buddhist Literature. (Vide Gulattha Vinicchaya Vol. I pp, 20-23)
Even before that time, in the year 1172 of the Buddhist Era, (about 1810 A.D) during the reign of King Padon, the founder of the Royal City of Amarapura, the same question was put by Sayadaw Thirimalar of Monywa to the learned Monywa Jetavan Sayadaw. The two answer of the Monywa Jetavan Sayadaw which appears in the Samanta cakku dipani Vol. I pp. 429-532.
“It is clearly stated in the Maha Parinibbana Sutta that the Lord Buddha did not adorn himself with the royal regalia, such as the crown, necklaces, rings, bracelets etc. However, because the Buddha delivered many of his sermons from the thrones of kings, certain inhabitants of the far-flung universes were under the impression that it was their king who was speaking to them. According to our elders, it is this impression in the minds of those extra-terrestrial beings, of the Buddha in royal regalia, which gave rise to the production and worship of the crowned Buddha images.”
The Casting of the Mahakyain Pharas
The first step in the process of casting the Mahakyain Phara is taken by the Chancellor or Prime Minister, who, in consultation with other learned ministers and court Brahmins (Royal astrologers), chooses the most auspicious day and hour for the casting.
After this, the site for the casting is chosen with the same care. The ground is leveled and to cleanse the site (i.e. to ward off evil spirits), monks are invited to the site, offered food, and requested to recite the Kammava, the Prittas, the Mangala Sutta and the Brahmajala Mantra.
A large temporary hall is then erected over the site. This hall is enclosed by three lattice-work fences, one inside another. The wood of certain trees which have an affinity for the planets - such as the Gangaw (Mesua Ferrea), the Saga (Michellia Champaca), the Chaya (Mimusops Clerigi) and the jackfruit are selected in order to obtain wooden posts free from blemish. The selected pieces or wood are then shaped into eight posts, lacquered and gilded, and then planted inside the Hall at the eight points of the compass to represent the eight planets. Staves with streamers, magical banners and yak-tail whisks are also put up. At each corner of the boundary lines marked off by the three light fences,abanana plant bearing fruit is planted, makingatotal of twelve banana plants. The innermost fence is draped with white cloth, while the two outer ones are draped with red cloth. Nine silver pots containing pure water together with nine white umbrellas (the insignia of royalty) are placed at each of the eight posts representing the planets and at the actual site where the casting is to take place. To melt the precious metals for the image, new melting pots andanew fireplace are needed. For fuel only scented woods are used.
When the appointed day and hour arrives, eight Brahmins invested with certain sacerdotal functions, stand at the planetary pillars and blow their right-volute conches, thereby ceremonially inviting the guardian Nats (gods) of the planets, the Lokapala Nat, the Guardian Nats respectively of the Religion, the Country, the Sky, the Earth, and the Trees. They follow this up witharecitation of mantrams or spells such as the Grahajaya Verse, the Saranasirishindha Bhumijala Verse and others. It is at this moment that the sculptors, who are to cast the image, wearing pure white clothing, begin to kindle their fire, using sandalwood. Then the precious metals which are to be used for casting the image are placed in the new pot to be melted. This melting down of the metals is done only during the day. The pot must not be removed from the fireplace at this juncture. Neither must the fire be extinguished. It has to be allowed to die down by itself. The melting process continues for nine whole days till the auspicious moment arrives for the sculptors to cast the Mahakyain Phara. During the casting, the image is made to face the east. While the casting is in progress, the Brahmins strew closured artificial flowers made from rice grains parched till they burst open, and they recite the verse beginning “Anekajatisamsara…”
Buddha Abhiseka Mangala Ceremony
When the sculptors have added the final touches to the Mahakyain Phara image, the Brahmins ceremonially wash the image in pure water and then spray scent over it. A golden salver, ornamented with the nine varieties of gems, on which is laidapiece of most expensive cloth, which in turn covered byapiece of white cloth, is brought forward, and the image is transferred onto the salver. At this moment the Brahmins reciteamantram,asort of prayer to ward off evil.
For the ceremony of the Buddha Abhiseka Mangala, the Chancellor has to invite, in advance, five, seven or nine Buddhist monks, venerable of age and renowned for their holiness. These invited monks sit inacircle around the image, their fingers holding the white cloth on which the image reposes. Then they recite in unison the Buddha Abhiseka verse. When the recitation ends, the Brahmins blow on their right-voluted conches, while the lay musical bands stationed outside the Hall produce an outburst of music on their instruments, and this outburst of sound marks the conclusion of the Buddha Abhiseka Mangala Ceremony.
Then with the Chancellor leading the way, the image is transferred to the Royal Palace, the King, Queen, Princes and Princesses as well as the court officials await in readiness to greet the arrival of the Mahakyain Phara, and to pay obeisance to it with scents, before taking it to be placed in the altar room.
The posture of the Mahakyain Phara images is the usual crosslegged posture, but the Mahakyain Pharas are distinguished from ordinary images in that each wearsacrown just like that ofaking who takes part inaCoronation Ceremony. The ears are adorned with royal ear-rings. The body is covered, not with the monk’s robe but with royal garb. This garb is an exact representation of the royal grab worn by the king at whose command the image was cast. For this reason, the royal garb of one Mahakyain Phara is quite distinct from that of another, and it can clearly be seen that with progress the royal garb became increasingly more elaborate.
Among the images two types of cross-legs posture can be seen. One type has the left foot placed under under the right leg, and the right foot placed on the left thigh. See Picture. Go The other type has the two legs crossed so that both feet are brought to rest, soles upwards, on the thighs. See Picture. Go
The images can also be divided into three types according to the position of the hands. The first type is known as the “bhumisparsa mudra”,atype wherein the left hand is placed palm upwards on the lap, and on the open palm is placedagolden bowl. The right hand rests, palm down, on the right knee, the fingers all pointing downwards and the fingertips touching the ground or the throne on which the image is seated. See Picture. Go The second type is known as the “dhyana mudra”. It portrays the Buddha in meditation, with both hands resting inarelaxed manner on the lap, both palms upward, the right hand resting on the left. Certain images of this type show the two thumbs, with their tips touching each other, while the fingers are slightly spread in the normal manner. One the outspread palm,abegging bowl,anectar bowl oragolden bowl is usually placed, See Picture. Go
The third type depicts the Buddha with his right arm bent at the elbow. The hand raised towards the shoulders is closed as if grasping something. The left hand is placed on the “lap, palm turned upwards, but the fingers again clasped as if holding something. See Picture. Go
The sizes of the images also vary, fromahands breadth toacubit, in accordance with the wishes of the kings who commissioned the casting. The weight too variesagreat deal because of the difference in size. These Mahakyain Phara images are still to be found all over Arakan.
The use of Crowned Buddha In Coronation Ceremony
For his Coronation Ceremony, an Arakanese king first selects the most renowned pagoda within his kingdom as the site, and then proceeds towards it in Royal Procession, passing out of the Palace grounds through the Mangala Gate. Arriving at the platform of the selected pagoda, each personage takes up his assigned position. The king then raises the Mahakyain Phara to the top of his head, and holding it there, he makes three circuits of the pagoda. He completes the third circuit at the temporary Hall where the coronation is to the place. The Coronation Ceremony itself follows traditional rites. At the conclusion, the Thathanabaing Sayadaw (the Patriarch or Principal Monk of the kingdom) andanumber of monks who can recite from memory the whole of the Tipitakas (the three main can onical divisions of the Buddha’s teachings are divided into Vinaya, Code of Discipline, Sutta, Discourses, and Abhidhamma, Higher Doctrine), then hold the Mahakyain Phara over the King’s head and exhort him to uphold justice in the tradition of his forefathers, to venerate the Triple Gem (Buddha, Dhamma and Sangha), to encourage the Buddhist religion within his kingdom, and to suppress the enemies of Buddhism. The king has to take an oath and declare that he will faithfully discharge his duties as enumerated above. This oath-taking is the high point of the ceremony.
In this manner, every king of Arakan (according to tradition), has hadaMahakyain Phara cast for his coronation. The images are shown crowned and in the royal garb of the kings who had cast them, so the mode of dress of the Arakanese kings can be conjectured very accurately fromastudy of these images.
The Arakanese Tradition
The Arakanese peasantry in olden days very often usedaBuddha image to take an oath in trying to settle conflicting claims or even criminal cases. This practice was no doubt, in some measure, due to their belief and faith in Buddhism but could just as easily have derived from the King’s Royal Oath-taking.
The Buddist Art of Ancient Arakan စာအုပ်မှထုတ်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by International Arakanese Student Monks at 11:47 AM0comments
(မှတ်ချက်။ ။ I. A . S. M တိအားလုံး၏ခံစားမှုကို ရွီးဖွဲ့ထားပါရေ။)
Posted by International Arakanese Student Monks at 11:27 AM0comments
သတ္ထုဗိမ္ဗ သုတ္တန် တရားတော်
(ဗုဒ္ဓဆင်းထု ကိုးကွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးဖလအာနိသံသကို မဟာစန္ဒသူရိယ မင်းကြီးနှင့် ဓညတီ တိုင်းသူပြည်သား လူအများရို့အား မြတ်စွာဘုရားသျှင် ဟောကြားတော်မူခရေ သတ္ထုဗိမ္ဗသုတ္တန်တရားတော်)
နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ သောဘဂဝါ ဓညဝတီရဋ္ဌံ စန္ဒသူရိယရာဇာနံ အာရဗ္ဘ၊ ဣဒံသတ္ထု ဗိမ္ဗသုတ္တံကထေသိ။
ဒသဗလော၊ အားတော်ဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူထသော။ မာရဇိနော၊ မာရ်စစ်သည်အပေါင်းရို့ကို အောင်မြင်ခြင်း ဟိတော်မူထသော။ အတုလော၊ သီလအစဟိသော ဂုဏ်တော်ရို့ဖြင့် တစုံတစ်ယောက်သောသူနှင့် တူမျှတော်မမူထသော။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သစ္စာပါးမြတ်တရားကို ပိုင်းခြားထင်ထင် သိမြင်တော်မူထသော။ သောဘဂဝါ၊ သုံးလောကထွဋ်ထား ထိုမြတ်စွာဘုရားသည်။ ဓညဝတီရဋ္ဌံ။ ဓညဝတီတိုင်းကြီးသို့။ အာဂန္တွာ၊ ကြွလာတော်မူပြီး၍။ စန္ဒသူရိယရာဇာနံ၊ မဟာစန္ဒသူရိယအမည်ဟိသော မင်းကြီးကို။ အာရမ္ဗ၊ အကြောင်းပြု၍။ ဣမံ၊ ဤသတ္ထုဗိမ္ဗသုတ်တော်ကို။ ကထေသိ၊ ဟောကြားမြွက်ဖော် မိန့်ဟတော်မူခပါလီသတည်း။
၁။ ။ ဒေဝလောကေ မနုေဿစ၊ အပရာ ပရစေတနာ၊
အာစိက္ခမေ မဟာဝီရ၊ သောတုမိစ္ဆာမိ တံဂုဏံ။
မဟာဝီရ၊ ကြီးသောလုံ့လဟိတော်မူထသော မြတ်စွာဘုရား။ ဒေဝလောကေစ၊ နတ်ရွာခြောက်ထပ် အထက်အရပ်၌ လည်းကောင်း။ မနုေဿစ၊ လူများပျော်ရာ အောက်ရပ်ရွာ၌ လည်းကောင်း။ အပရာ ပရစေတနာ၊ အဆက်ဆက်သော စေတနာ၏ အကျိုးရို့ကို။ မေ-မမ၊ စန္ဒသူရိ နာမတွင်ခေါ် ဘုရားတပည့်တော်အား။ အာစိက္ခ၊ ဟောကြားတော်မူပါလော။ တံဂုဏံ၊ ထိုရုပ်ပွားတော်ကို ကိုးကွယ်ပူဇော်ရသော အကျိုးဖလ အာနိသံသကို။ အဟံ၊ မဟာစန္ဒသူရိယ နာမတွင်ခေါ် ဘုရားတပည့်တော်သည်။ သောတုံ၊ နာကြားမှတ်သားအံ့သောငှါ။ ဣစ္ဆာမိ၊ အလိုဟိလှပါ၏ အသျှင်ဘုရား။
၂။ ။ သောတဿ ဝစနံ သုတွာ၊ ဘဂဝါဧတမဗြဝီ၊
သာဓု သာဓု မဟာရာဇ၊ တမတ္တံပုစ္ဆ တံတယာ။
သောဘဂဝါ၊ ထိုသုံးလူထိပ်တင် ဘုရားသျှင်သည်။ တဿ၊ ထိုမဟာစန္ဒသူရိနာမ မည်တွင် ဘဝသျှင်မင်းတြား၏။ ဝစနံ၊ တောင်းပန်လျှောက်ထားသော စကားကို။ သုတွာ၊ ရွှေနားတော်မြတ် ကြားတုံလတ်၍။ မဟာရာဇ၊ ရခိုင်ဘုရင် ဘဝသျှင်မင်းမြတ်လောကနတ်။ သာဓု သာဓု၊ ကောင်းလီစွ ကောင်းလီစွ။ တယာ၊ မဟာစန္ဒသူရိယ နာမမည်တွင် သင်ဘဝသျှင်သည်။ ပစ္ဆိတံ၊ မိန်းအပ်သော။ တံမတ္ထံ၊ ထိုသို့ဂုဏ်ထူးကျေးဇူးများကို။ အဟံ၊ သုံးလူသခင် ငါ ဘုရားသျှင်သည်။ ကထေဿမိ၊ ဟောကြားပေအံ့။ ဣတိ ဧတံ၊ ဤသို့သော စကားတော်ကို။ အဗြဝီ၊ မိန့်တော်မူပြီ။
၃။ ။ ယေနရာ ပဋိမာကရာ၊ လေခကာစ ဗြမ္ဗမဟူ
မဟာဂုဏေ လဘန္တိတေ၊ ကထေဿမိ သုဏောဟိမေ။
မဟာရာဇ၊ သမုတ္တိနတ် အိုမင်မြတ်။ ယေနရာ၊ အကြင်သူရို့သည်။ ပဋိမာကရာ၊ ငါဘုရား၏ ကိုယ်စား ဆင်းတုတော်၊ ရုပ်ပွားတော်ရို့ကို ပြုလုပ်စီမံကြကုန်၏။ လေခကာစ၊ အဆင်းလှပတင့်တယ်သော ဆီးရို့ဖြင့် ရေးမူလည်း ရေးဆွဲကြကုန်၏။ တေနရာ၊ ထိုလူအပေါင်း သူတော်ကောင်းရို့သည်။ ဗြမ္ဗမဟူ မဟာဂုဏေ၊ မြတ်ကုန် များစွာကုန်သော အကျိုးဖလ အာနိသံသရို့ကို။ လဘန္တိ၊ ရကြလီကုန်၏။ အဟံ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓဟု နာမညထင်ရှား ငါဘုရားသည်။ ကထေဿာမိ၊ ဟောကြားပေအံ့။ တွံ၊ သင်တကာတော် မင်းမြတ်ကျော်သည်။ မေ၊ ငါဘုရား၏။ ဝစနံ၊ ဟောကြားပေတတ်စကားတော်မြတ်ကို။ သုဏောဟိ၊ မှတ်သား၍သာ နာကြားပါလော။
၄။ ။မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိက ဌာနေသု၊ အသညာ အရူပီနောစ
သဒ္ဓ ဝန္တာ နဇာယန္တိ၊ ဗိမ္ပံလေခဿိဒံ ဖလံ။
မဟာရာဇ၊ ရခိုင်ဘုရင် ဘဝင်သျှင်မင်းမြတ် လောကနတ်။ သဒ္ဓဝန္တာ၊ သဒ္ဓါတရာပွားများခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကုန်သော။ ယေနရာ၊ အကြင်များပြားလှစွာ မျိုးလေးဖြာရို့သည်။ ဗိမ္ဗံ၊ ငါဘုရား၏ကိုယ်စား ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို။ ကရာ၊ ရေသွန်းထုလုပ်ခြင်းကို ပြုကြကုန်ရာ၏။ တေနရာ၊ ထိုသို့များစွာ မျိုးလေးဖြာရို့သည်။ မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိက ဌာနေသုစ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌအယူဟိသော ပုဂ္ဂိုလ်ရို့၏ဖြစ်ရာဌာန ဘုံဘဝရို့၌လည်းကောင်း။ အသညာ အရူပီနောစ၊ အသညသတ် ဗြဟ္မာ ၊ အရူပ ဗြဟ္မာရို့၌လည်းကောင်း။ နဇာယန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်။ဣဒံ၊ ဤသည်ကား။ ဗိမ္ဗံ၊ ငါဘုရား၏ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို။ လေခဿ၊ ရေသွန်းလုပ်၍ ကိုးကွယ်ပူဇော်ခြင်း၏ ဖလံ၊ အကျိုးဂုဏ်အင် အာနိသင်ပါပေတည်း။
၅။ ။ အထဝါ အသည သတ္တေသု၊ အရူပေသု တထေဝစ
သဒ္ဓ ဝန္တာ နဇာယန္တိ၊ ယေနရာ ဗိမ္ဗ မုတ္တနံ။
မဟာရာဇာ၊ အရိယာနွယ်ဝင် ဘဝသျှင်မင်းမြတ်လောကနတ်။ သဒ္ဓဝန္တာ၊ သဒ္ဓါတရားပွားများ ကြကုန်သော။ ယေနရာ၊ အကြင်များပြားလှစွာ မျိုးလေးဖြာရို့သည်။ ဥတ္တမံ၊ မြတ်သော။ မေ၊ ငါဘုရားသျှင်၏။ ဗိမ္ဗံ၊ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို။ ကရာ၊ ရေထုသွန်းလုပ်၍ ပူဇော်ခြင်းကို ပြုကြကုန်၏။ တေနရာ၊ ထိုသို့များစွာမျိုးလေးဖြာရို့သည်။ ဥတ္တမံ၊ မြတ်သော။ မေ၊ ငါဘုရားသျှင်၏။ ဗိမ္ဗံ၊ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို။ ကရာ၊ ရေသွန်းထုလုပ်ခြင်းကို ပြုကြကုန်ရာ၏။ တေနရာ၊ ထိုသို့များစွာ မျိုးလေးဖြာရို့သည်။ အသည သတ္တေသုစ၊ အသညသတ်ဘုံရို့၌လည်းကောင်း။ အထဝါ၊ ထိုမှတပါး။ အရူပေသုစ၊ အရူပလေးဘုံရို့၌လည်းကောင်း။ တထေဝ၊ ထို့အတူသာလျှင်။ နဇာယန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်။
၆။ ။ပစ္စန္တိကေ နဇာယန္တိ၊ မဇ္ဈိမေယေဝ ဇာယရေ၊
မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌီ နဇာယရေ၊ ဣတ္ထိ ဗျဉ္ဇန ပဏ္ဍကာ။
မဟာရာဇာ၊ မဟာစန္တသူရိယဘုရင် ဘဝသျှင်မင်းမြတ်လောကနတ်။ ယေနရာ၊ အကြင်သူရို့သည်။ မေ၊ ငါဘုရား၏။ ဗိမ္ဗံ၊ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို။ ကရာ၊ ရေးထုသွန်းလုပ်၍ ပူဇော်ခြင်းကိုပြုကြကုန်၏။ တေနရာ၊ ထိုသူရို့သည်။ ပစ္စန္တိကေ၊ ပစ္စန္တရာဇ် ဇနပုဒ်အရပ်၌။ နဇာယန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်။ မဇ္ဈိမေယေဝ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာဖြစ်ထွန်းရာ မဇ္ဈိမတိုက်အရပ်၌သာလျှင်။ ဇာယရေ-ဇာယန္တိ၊ ဖြစ်ကြကုန်၏။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌီ၊ မှားသော်အယူဟိသူရို့သည်လည်းကောင်း။ ဣတ္ထိဗျဉ္ဇန ပဏ္ဍကာစ၊ မ-မ (မိန်းမ) ဥဘတောဗျဉ်း၊ မဏ္ဍုတ်ရို့သည်လည်းကောင်း။ နဇာယရေ နာဇာယန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်။
၇။ ။ ကာလကဉ္စိက နာမေသု၊ ဟီနေသွသူရ ကေသုစ။
ပေတလောတကေ တိရိစ္ဆာနေ၊ နတေဂစ္ဆန္တိ ဒုဂ္ဂတိံ ။
မဟာရာဇာ၊ ဥပသကာ ဒါယကာ မင်းမြတ်လောကနတ်။ တေ၊ ထို ငါဘုရား၏ ရုပ်ပွားတော်ကို လှူဒါန်းပူဇော်သော သူရို့သည်။ ကာလကဉ္စိက နာမေသု၊ ကာလ ကဉ္စိက အမည်ရကုန်သော။ ဟီနေသု၊ ယုတ်ညံ့ကုန်သော။ အသူရကေသုစ၊ အသုရာမျိုးရို့၌လည်းကောင်း။ ပေတလောကေစ၊ ပြိတ္တာဘုံ၌လည်းကောင်း။ တိရစ္ဆာနေစ၊ တိရိစ္ဆာန်ဘုံ၌လည်းကောင်း။ နဇာယရေ-နဇာနန္ဒိ၊ မဖြစ်ကုန်။ ဒုဂ္ဂတိံ စ၊ မကောင်းသော သူရို့လားရောက်ရာ ဌာန ဒုဂ္ဂတိဘုံဘဝသို့လည်း။ နဂစ္ဆန္တိ၊ မလားရောက်နိုင်ကုန်။
၈။ ။ နိဇ္ဈာမ တဏှ ပေတသု၊ ခုပ္ပိပါယာမိ ပီဠိတာ။
သဒ္ဓ ဝန္တာ နဇာယန္တိ၊ ယေဗိမ္ဗံ လေခကာ ကရာ။
မဟာရာဇာ၊ ရက္ခိုင် ရီမြီပိုင်သစိုးလတ် လောကနတ်။ သဒ္ဓ ဝန္တာ၊ သဒ္ဓါတရား လွန်ပွားများကြကုန်သော။ ယေနရာ၊ အကြင်သူရို့သည်။ ဗိမ္ဗံ၊ ငါဘုရား၏ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို။ ကရာ၊ သွန်းထုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မူလည်း။ ရေးဆွဲပူဇော်ကြကုန်၏။ တေနရာ၊ ထိုလူရို့သည်။ နိဇ္ဈာမတဏှ ပေတေသု၊ နိဇ္ဈာမတဏှိက ပြိတ္တာမျိုးရို့၌။ ခုပ္ပိပါသာဟိ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းရို့သည်။ ပီဠိကာ၊ နှိပ်စက်အပ်ကုန်သည်။ နဇာယန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်။
၉။ ။ မဟာ အဝီစိ နာမကေ၊ တထာ လောကန္တရေသုစ။
န်ိရယေသုနုပ္ပဇ္ဇန္တိ၊ ယေဗိမ္ဗံ လေခကာ ကရာ။
မဟာရာဇ၊ ရက္ခိုင် ဘုရင်မဟာစန္ဒသူရိယမင်းမြတ် လောကနတ်။ ယေနရာ၊ အကြင်သူရို့သည်။ ဗိမ္ဗံ၊ သွန်းထုပြုလုပ်အပ်သော ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်မြတ်ကို။ လေခကာ၊ တင့်တယ်သပ္ပါယ်သော ပန်းချီဆီးရည်ရို့ဖြင့် ရေးမူလည်း ရေးသားကြကုန်အံ့။ ကရာ၊ လှူဒါန်းပူဇော်မှုကိုလည်း ပြုကြကုန်၏။ တေနရာ၊ ထိုလူရို့သည်။ မဟာအဝီစိ နာမကေ၊ မဟာအဝီစိ မည်သော ငရဲ၌လည်းကောင်း။ တထာ၊ ထိုမှတပါး။ လောကန္တရေသုစ၊ လောကန္တရိက အမည်ဟိသော။ နိရယေသုစ၊ ငရဲရို့၌လည်းကောင်း။ နုပ္ပဇ္ဇန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်။
၁၀။ ။ တံ ကမ္မံ ကုသလံကတွာ၊ ယာဝဇီဝံ အနုဿရေ၊
နဇာယန္တိ ဒုဂ္ဂတိမှိ၊ အဝီစိမှိ နိရယေ တပေ။
ဟိ၊ မှန်၏။ မဟာရာဇ၊ မဟာစန္ဒသူရိယ ဘုရင်မင်းမြတ်လောကနတ်။ ယေနရာ၊ အကြင်သူရို့သည်။ ကုသလံ၊ ကောင်းမြတ်လှစွာသော။ တံကမ္မံ၊ ထိုရုပ်ပွားဆင်းတု ပူဇော်ခြင်းအမှုကို။ ကတွာ၊ ပြုလုပ်ကြကုန်၍။ ယာဝဇီဝံ၊ အသက်ဆုံးသည်တိုင်အောင်။ အနုဿရေ၊ အစဉ်မသွေ အောင့်မိကုန်၏။ တေနရာ၊ ထိုလူရို့သည်။ ဒုဂ္ဂတိမှိ၊ မကောင်းသောသူရို့လားရောက်ရာဖြစ်သော။ တပေ၊ ပူလောင်လှစွာသော။ အဝီစိမှိ၊ အဝီစိအမည်ဟိသော။ နိရယေ၊ ငရဲပြည်၌။ နဇာယန္တိ၊ မဖြစ်ကုန်။
မှတ်ချက်။ ။အသျှင်ဝရသာမိ ၊ဓညဝတီသာသနာပြုကျောင်း၊ ဦးထောင်ဗိုလ်လမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန် ပြုစုရေ စာအုပ်ချေကို ရခိုင်ဘာသာသို့ တတ်နိုင်သလောက်ပြန်ထားပါရေ။ မှားယွင်းချက်ပါဟိက ကျောက်ဖြူသားချေ၏ မှားယွင်းချက်ရာဖြစ်ပါရေ။
နောက်ထပ် ကျန်နိန်သိမ့်ရေ အပိုင်းတိကိုလည်း ဆက်လို့တင်ပီးလားပါမေ။
Posted by International Arakanese Student Monks at 9:58 AM0comments
Pagoda relics burgled in Nilla village, Bangladesh...